महिलाहरूमा त्यस्तो के छ, जसले उनीहरूलाई पुरुषको दाँजोमा बढी सुरक्षित बनाइरहेको छ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/महिलाहरूमा त्यस्तो के छ, जसले उनीहरूलाई पुरुषको दाँजोमा बढी सुरक्षित बनाइरहेको छ?
देश–महादेशका सीमा नाघेर, सागर–महासागरका छालहरू तरेर संसारका कुना–कुनामा फैलिएको कोरोना भाइरसको एउटा तथ्यांक रोचक छ। यो तथ्यांक महामारी फैलिएका सबै देशमा समान पाइन्छ।यसै आधारमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतार होला, तर यो केही न केही संकेत अवश्य हो।
आनीबानीको यो भिन्नताले संक्रमित पुरुषलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्‍याउन केही न केही भूमिका पक्कै खेल्यो होला। तर, के भाइरस फैलिएका सबै मुलुकमा पुरुषहरू महिलाभन्दा फोहोरी छन्?
के चीनदेखि अमेरिका, इटाली, स्पेन, बेलायत सबैतिर पुरुषहरू नियमित हात धुँदैनन्?
मलाई थाहा थियो, इमाको चोट बढी भए पनि मेरोभन्दा चाँडै भरिनेछ। उनी मभन्दा पहिले नै तङ्ग्रिने छिन्। र, मभन्दा पहिले नै आरामले हिँडडुल गर्न थाल्ने छिन्।आखिरमा त्यस्तै भयो। उनकोभन्दा मेरो घाउ निको हुन धेरै समय लाग्यो।महिलाहरूको ‘जीन’ बलियो हुनुको कारण के त? यसको सुरूआत हाम्रो क्रोमोजोमबाट हुन्छ।